Lalàna tsy mandeha lalana… | NewsMada
Lalàna tsy mandeha lalana…
Par Taratra sur 14/04/2018
Fomba fiteny ankehitriny ny hoe tsy mandeha lalana, ilazana izay mibirioka any amin’ny tsy izy fa tsy araka ny lalana na lalàna. Amin’izao adihevitra be momba ny lalàm-pifidianana izao, mba mandeha lalana na araka ny tokony ho izy ve izany? Na ny fomba nandaniana azy, na ny votoatiny… Ho hita eo izay hataon’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana (HCC).
Ny tsy azo lavina, tarazo ratsy amin’izao fitondrana izao ny tsy fanarahan-dalàna: atao amin’izay mahametimety ny tena, na amin’izay amotehana ny hafa. Teo, ohatra, ny fomba fanolorana praiminisitra, tsy araka ny And. 54 amin’ny lalàmpanorenana; ny tsy fahazoan’ny depiote miova vondrona politika ankoatra ny anaran’ny vondrona nahavoafidy azy, araka ny And. 72.
Hatramin’izao, mandeha ho azy ny tsy fanarahan-dalàna. Izay manara-dalàna indray no adala na diso? Na tsy ampiharina ny lalàna, raha tsy ho an’ny hafa izay manahirana sy manohitra. Tiana hampitandremana izany, na hofaizina, na hopotehina… Amin’izany, tsy misy izay fisaraham-pahefana: eo ambany vahohon’ny mpanatanteraka ny fahefana mpanao lalàna sy mpitsara.
Firifiry, ohatra, ny olom-panjakana teo aloha na efa tsy am-perinasa intsony monina soa aman-tsara amin’ny tranom-panjakana… firy tao-maty? Toy izany koa ny fampiasana fitaovam-panjakana toy ny fiara, ohatra. Tsy misy izay fampiharan-dalàna amin’izany, fa izay manohintohina na tsy zaka ny ataony: sorohina avy hatrany tsy misy fampandrenesana na fanajana.
Eo koa ny antsojay atao amin’ny mitantana vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana toy ny ben’ny Tanàna, rahonan-dava amin’ny fampiatoana na fanalana. Tsy mpomba ny mpitondra tsinona… Tonga hatramin’ny fanaraha-maso ny fitantanana. Nefa firifiry ny tsy mahomby, na eo amin’ny sampandraharaha eo ambany maso ihany aza? Eny, ny fomba fitantanan’ny tena aza…
Aiza ny hoe fanjakana tan-dalàna? Hambohambo adala mampievotrevotra. Lalàna tsy mandeha lalana fa ho an’izay manohitra, tsy zaka ny ataony, manelingelina, manahirana… Hahagaga raha tsy to teny ny mpitondra… tsy tan-dalàna? Tsy amin’izay izy tsinona ny fampiharan-dalàna.